အမျိုးသမီးများအဆင်ပြေဖိနပ် - ပြဿနာခြေသက်ကြီးရွယ်အိုများ, ခရီးသွား, အလုပ်အဘို့, တစ်နေ့လုံးလမ်းလျှောက်, အပြည့်အဝကျယ်ခြေထောက်, ပြင်ဆင်ပြီးသုံး, ပလက်ဖောင်း
အဆင်ပြေဖိနပ် - ဘယ်လောက်အားလုံးအခါသမယများအတွက်တစ်ဦးအဆင်ပြေ pair တစုံကိုရွေးချယ်သနည်း
မကြာသေးမီကအမျိုးသမီးဖိနပ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပို. ပို. stylist နှင့်ဒီဇိုင်နာများက၎င်း၏အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်ကြီးစွာသောအာရုံကိုပေးဆောင်နေကြသည်။ ကျန်းမာရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်မတတ်နိုင်တဲ့သူဟောင်းများကိုအမျိုးသမီးများနှင့်မင်းသမီးများအတွက်စံပြတစ်ခုလုံးကိုအချိန်ခြေအိတ်, စဉ်အတွင်းအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေမမော်ဒယ်များ။
ရာသီသစ်အမြိုးသမီးမြားရဲ့အဆင်ပြေဖိနပ်ခုနှစ်တွင်လူကြိုက်များထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းလူသိများ stylist နှင့်ဒီဇိုင်နာများစိတ်ဝင်စားဖို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်း ဖိနပ်များ၏မော်ဒယ်များ wear စဉ်အတွင်းအများဆုံးနှစ်သိမ့်သေချာစေရန်, ခြေနင်း, ဘွတ်ဖိနပ်နှင့်ခြေကျင်းဘွတ်ဖိနပ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အာရုံစူးစိုက်ထုတ်ကုန်များ၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်မှပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို - Trendsetters INSERT နှင့်ပိုပြီးခြားနားသည်, အလှဆင်ဒြပ်စင်ပေါ်တွင်တောက်ပသောအရောင်များကို skimp ပါဘူး။
အထူးသဖြင့်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့်အခမ်းအနားများများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမြင့်ဒေါက်ဖိနပ်ပေမယ့်နေဆဲအချို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသမီးထိုထုတ်ကုန်ရွေးချယ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်တစ်ခု option ကိုအဖြစ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်များပါးလွှာသော pin ကိုအပေါ်အခြေခံပြီး, သူခဲမြင့်မြင့်တက်သတိပွုမိရာကအထူနှင့်တည်ငြိမ်ဖနောင့်ကြသည်မဟုတ်။
သူတို့သည်အလွန်ချော်နဲ့ကျသွား၏အခွင့်အလမ်းကိုတိုးမြှင့်အဖြစ်ဆောင်းရာသီ, နွေဦးနဲ့ဆောင်းဦးကာလ၌, ဒေါက်တာလျော့နည်းသက်ဆိုင်ရာပူနွေးသောရာသီအတွက်ထက်ဖြစ်လာသည်။ သို့သော်ဤကာလအတွင်း၌နေသောအချို့သောအမျိုးသမီးများ, သိသိသာသာမြင့်တက်လာဖွင့်ပေးချင်ထူဖနောင့်ခြင်းနှင့်ပလက်ဖောင်းလယ်ထွန်စက်နှင့်အတူဖိနပ်သို့မဟုတ်ဘွတ်ဖိနပ်၎င်းတို့၏ preference ကိုပေး, ရေခဲမျက်နှာပြင်နှင့်အတူအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲပေးသည်မဟုတ်။
တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးအတွက်မင်းသမီးနှင့်အတူပေါ်ပြူလာအမျိုးသမီးများအဆင်ပြေပလက်ဖောင်းဖိနပ်။ အဖြစ်ဒေါက်နှင့်အတူမော်ဒယ်, သူမနိုင်အမြင်အာရုံက၎င်း၏မွေခံရသောသူကိုအတန်ငယ်မြင့်မားတဲ့ဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏ silhouette အောင် - ပါးလျနှင့် sleeker ။ ထို့အပြင်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ထုတ်ကုန် - ဤအဆစ်ရောဂါများခံစားနေရပြီးလူများအတွက်အများဆုံးအဆင်ပြေဖိနပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်ချမ်းအေးတဲ့ရာသီဥတုပလက်ဖောင်းပေါ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဝယ်လိုအား options များနှင့်အတူဒေသများရှိသူတို့တခြားအလားတူမော်ဒယ်များထက်အများကြီးပူနွေးကြောင့်နှင့်ဆီးနှင်းဖုံးသို့မဟုတ်ရေခဲမျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်သောအခါအပြင်, အများဆုံးနှစ်သိမ့်နှင့်တည်ငြိမ်ရေးသည်။ ဤသည်ထုတ်ကုန်များ၏အထူးသဖြင့်မှန် နေတဲ့လယ်ထွန်စက်၏ platform ပေါ်တွင် လုံလောက်သောတည်ငြိမ်မှုရှိပြီးချော်မ။
အဆင်ပြေနွေရာသီအမြိုးသမီးမြားရဲ့ဖိနပ်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာက၎င်း၏ဆီလျော်မှုရှုံးနိမ့်နှင့်အများဆုံးကိစ္စများတွင် preference ကိုသူတို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့အရပ်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနေသောသူမ၏ ပတျသကျ. အလှနျသေးနုဖက်ရှင်, ထိုသို့ပေးတော်မူမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်မိမိတို့၏ရွေးချယ်မှုတစ်ခု platform ပေါ်တွင်ဖိနပ်သို့မဟုတ်ခြေနင်းပေါ်အရပ်ရှည်ရှည်အမြိုးသမီးတရပ်တန့်ပါကတစ်ဦး rounded ခြေချောင်းတွေနဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့အကြံပြုသည် - သူတို့ခြေထောက်ကပိုကြော့စေမည်။
ဆရာဝန်တွေအဆိုအရအဆင်ပြေစေရန်နှင့်ပလက်ဖောင်းများ၏ကျောရိုးနှင့်အဆစ်များ၏ကျန်းမာရေးချွေတာဘို့4စင်တီမီတာထက်မပိုသင့်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအနည်းငယ်မြင့်တက်နှင့်အတူအဆင်ပြေအမျိုးသမီးဖိနပ်ကသူတို့ခြေထောက်ပေါ်သူတို့ရဲ့အချိန်အများစုကိုဖြုန်းတဲ့သူတွေကိုမိန်းကလေးများအဘို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်သောအဆိုပါခြေကျင်းအပေါ်ဝန်တိုးမြှင့်မခြေချုံ့မထားဘူး။
တုံးအဖနောငျ့နဲ့ပလက်ဖောင်းများအကြားတစ်ဝက်တစ်ပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဖြစ်ကောင်းစွာနှစ်ခုရွေးချယ်စရာအဖြစ်ပြုလုပ်လျှပ်, ယဉျကြေးမှုနဲ့ကြော့ရှင်းများ၏ပုံရိပ်ကိုပေးခြင်း, မြေအထက်လှပသောအမျိုးသမီးများအတွက်အနည်းငယ် "ဓာတ်လှေကား" သူ့ဟာသူခွင့်ပြုပါတယ်။ အရိုးဆရာဝန်တွေအဆိုအရအများဆုံးအဆင်ပြေဖိနပ်ပြင်ဆင်ပြီးသုံးပိုမိုမြင့်မားဗားရှင်းရေရှည် wear စဉ်အတွင်းအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်စဉ်အကြောင်းကို 5-7 စင်တီမီတာမြင့်တက်ရှိပြီးအလုပ်သို့မဟုတ်စဉ်ဆက်မပြတ် wear ဘို့မသင့်တော်သည်။
၎င်းတို့၏ခြေထောက်ပေါ်အချိန်တွေအများကြီးရှိသည်မကြာခဏမေးခွန်းပေါ်ပေါက်ဘာအများဆုံးအဆင်ပြေဖိနပ်သူမြားစှာအမျိုးသမီးတွေ? တစ်ဦးချင်းစီမိန်းမပျိုများအတွက်အများဆုံးအဆင်ပြေသက်သာကဲ့သို့သောများစွာသောအချက်တွေအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တော့ဤမေးခွန်းကိုတစ်ဦးနှင့်အဖြေကိုပေးစေခြင်းငှါ, မဖြစ်နိုင်ပါ:
အထူးသဖြင့်အလုပ်သမားစစ်အစိုးရကို - တစ်အထိုင်များလူနေမှုပုံစံစတဲ့တစ်ဦးဟာသူတို့ရဲ့ခြေထောက်ပေါ်အမြဲတမ်းရပ်တည်မှုသို့မဟုတ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလှုပ်ရှားမှုဘို့လိုအပ်ကြောင်း,
- အထူးသဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအဘို့ဒီဇိုင်းပြောင်းရွှေ့, အဆင်ပြေအမျိုးသမီးဖိနပ်အပေါ်သူကိုအားလုံးနီးပါးကသူ၏အချိန်တက်ကြွစွာဖက်ရှင်အဘို့အ ပြားဘဝါးနှင့်အတူဖိနပ် သို့မဟုတ်အနိမ့်ဒေါက်ဖိနပ်, loafers နှင့် Laufer, slipony, Sneaker နှင့်ပြေးဖိနပ်။ ဆောင်းရာသီတွင်ဤမော်ဒယ်များတစ်ဦးအနိမ့်မြန်နှုန်းသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ဖနောင့်မှာအဆင်ပြေဖိနပ်များနှင့်ဘွတ်ဖိနပ်ဖြင့်အစားထိုးအဖြစ် ugg ဘွတ်ဖိနပ်, ရှည်မင်းသမီး၏စိတ်နှလုံးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်နေကြသည်။
ဤအတောအတွင်းကျွမ်းကျင်သူများက၎င်းတို့၏ခြေထောက်ပေါ်အလုပျအတှကျအမြားဆုံးအဆင်ပြေဖိနပ်ကြောင်းပြော - တစ်ဦးအနိမ့်ဖနောင့်ပေါ်မှာဤမော်ဒယ်အမြင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ 3-4 စင်တီမီတာ။ ဒါကဆောင်းပါးတစ်ဦးမြင့်အဖြစ်ဝတ်ဆင်လျက်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်ပြီး, ပြားချပ်ချပ်ဖိနပ်, ကျောရိုး၏အဖြစ်များတတ်သည်မှအပြားပေ varicose သွေးပြန်ကြောနှင့်အခြားရောဂါများပေါ်ပေါက်လာစေပါတယ်။
ခရီးစဉ်အပေါ် Going စီချစ်စရာကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးကအချိန်ကြာမြင့်စွာလမ်းလျှောက်နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အတွက်အများဆုံးအဆင်ပြေဖိနပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်သူမ၏အိတ်အတွက်စဉ်းစားပေးပါသည်။ ဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အောက်ပါ options များအဘို့အကောင်းဆုံးသင့်လျော်သည်:
ခြေကနေအစိုဓာတ်ကိုပယ်ရှား wicks ရာ Sneaker breathable ထည်။ ထိုကဲ့သို့သောဖိနပ်တစ်ဦးတည်းသောအတွက်ခြေလျင်၏ဖွဲ့စည်းပုံမှသက်ဆိုင်ရာ springy အကျိုးသက်ရောက်မှုခန္ဓာဗေဒတည်ဆောက်ပုံနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစော်ကားသောအပေါ် instep အဖြစ်အထူးအရိုး features တွေနှင့်အတူလွယ်ကူသောဖြစ်သင့်သည်,
အရမ်းပျော့နှင့် foldaway ရန်လွယ်ကူမဖြစ်သင့်သည့်ရော်ဘာဘဝါးနှင့်ဖိနပ်။ ဒါကအဆင်ပြေဖိနပ်သို့သော်အဆုံးစွန်သော option ကိုကြောင့်ရုတ်တရက်တိုက်ဖျက်မည်ကြိုးကိုမှပျော့အီဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်, အထူး Velcro သို့မဟုတ်ကြိုးကိုတိုသုံးပြီးဆွဲထားကြ၏ရမည်,
ပူပြင်းရာသီမိန်းမတို့အဘို့အရှိဆုံးအဆင်ပြေဖိနပ်ထဲမှာ - ကအလင်းခြေနင်းအားကစားအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
မျှော်လင့်မိခင်သိသာသောအပြောင်းအလဲအတွက်ကလေးများအတွက်စောင့်ဆိုင်းကာလဖြစ်ပေါ်, သင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်တစ်ဦးဗီရိုပစ္စည်းများနှင့်ဖိနပ်ရွေးချယ်တဲ့အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲနှင့် "စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့" အနေအထားတွင်အမျိုးသမီးငယ်၏အပိုခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုစုဆောင်းမှုမှ, ခြေမကြာခဏတကိုယ်လုံးရောင်နှင့်အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အစာအိမ်ကြီးထွားလာကျောနာကျင်မှုနဲ့ချို့ယွင်းချိန်ခွင်လျှာဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်ဆွဲငင်အား၏ဗဟို၏ရွှေ့ပြောင်းခံရ, ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
5 စင်တီမီတာ၏ဖနောင့်ပလက်ဖောင်းသို့မဟုတ်သပ်အမြင့်။ အရမ်းမြင့်မားတဲ့မြင့်တက်အဖြစ်တစ်ဦးပြားချပ်ချပ်ဝါး, တားမြစ်ထားသောနေကြသည်;
ခြေအခမဲ့အာကာသ။ ယင်းစောင့်ဆိုင်းကာလကလေးခြေဖမျက်သို့မှီနီးပါးအမြဲကျယ်ပြန့်ထိပ်, rounded ခြေချောင်းများနှင့်တပြင်လုံးကိုခြေမကျော်တဲ့ compression တစ်မရှိခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောအပြည့်အဝအရှိန်အဟုန်မှာ moms အကောင်းဆုံးအဆင်ပြေဖိနပ်, တကိုယ်လုံးရောင်ကတည်းက;
လှုပ်ရှားမှုတစ်ဦးစီအပေါ်, ရုံးတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လှပသောအမျိုးသမီးဖိနပ်တစ်ဦးတစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အတွက်အဆင်ပြေဖိနပ်ဣတ္နှင့်ကြော့ကိုကြည့်သင့်တယ်, ဒါပေမယ့်သူကမြေတပြင်လုံးတစ်နေ့လျှင် wear စဉ်အတွင်းအဆင်မပြေဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ ဒါကြောင့်စီးပွားရေးကိုအမြိုးသမီးမြားဟာဂန္ရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ် တရားရုံးဖိနပ် သို့မဟုတ်အခြားတံခါးပိတ်ရွေးချယ်စရာအတိုဒေါက်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပြီးသုံးအမြင့် 5-7 စင်တီမီတာ။
သူတို့ဘဝအတွက်အရေးအပါဆုံးနေ့၏အကြိုတွင်, အသီးအသီးမိန်းကလေးဂရုတစိုက်ဖိနပ်သို့မဟုတ်ခြေနင်း၏ရွေးချယ်ရေးမှအထူးသတိထားရမှာ, နောက်ဆုံးသောအသေးစိတ်၎င်းတို့၏လမ်းထွက်စဉ်းစားမိတယ်။ နေ့စွဲရန်, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ stylist နှင့်ဒီဇိုင်နာများ, အထင်ကြီးခြင်းနှင့်ကြော့ကြည့်သောငယ်ရွယ်သတို့သမီးများအတွက်ဖက်ရှင်အဆင်ပြေဖိနပ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမင်္ဂလာဆောင်ဝတ်စုံနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံပွဲစဉ်များနှင့်, အပြင်, ထိုနေ့ရက်သည်တစ်လျှောက်လုံးနှစ်သိမ့်နှင့်၎င်း၏ပိုင်ရှင်၏ကောင်းသောစိတ်ဓါတ်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နိုင်မည်။
ထို့ကြောင့်ကချစ်စရာကောင်းသေးငယ်တဲ့လှေပေါ်တွင်ဖိနပ်-ဒေါက်, ဒါမှမဟုတ်ပြင်ဆင်ပြီးသုံးဖြစ်နိုငျသညျ, ဣတ္ပုံစံမျိုး strass သို့မဟုတ်အခြားတောက်ပဒြပ်စင်နှင့်အတူဘဲလေးတိုက်ခန်းအဖြူရောင်သို့မဟုတ်အရောင်ဖျော့ဖျော့အရိပ်၏တဦးတည်း၏ဖိနပ်ပိတ်လိုက်တယ်။ ထို့အပြင်အဓိကအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပဘို့များစွာသောမိန်းကလေးငယ်များဇာနှင့်အတူအလှဆင်နေကြတဲ့ရိုးရှင်းပြီးလိုရင်းတိုဆောင်းပါးတွေကိုရွေးချယ်ပါ။
ယနေ့ဆိုင်များနှင့်ဖက်ရှင်ဆိုင်များအတွက်ညာဘက်မော်ဒယ်အလွန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်ရွေးချယ်ဖို့ရာအကြားလှပသောအမျိုးသမီးများအတွက်ဖိနပ်တစ်ဦးမယုံနိုင်လောက်အောင်ကျယ်ပြန့်ကိုယ်စားပြုသည်။ တိုင်းမိန်းကလေးသူမ၏ဖိနပ်လိုလား, ဘွတ်ဖိနပ်သို့မဟုတ်ခြေနင်း, လှပသောစတိုင်နဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပွတ်သပ်ကြဘူးနဲ့ wear စဉ်အတွင်းမသက်မသာခံစားရခြင်းမဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ အဆင်ပြေသက်သာဖိနပ်သင့်ရဲ့ option ကိုရွေးချယ်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသော proizhvoditelyami အတွက်ရရှိနိုင်ပေမယ့်, သင်ကအရမ်းဂရုတစိုက်လျောက်ပတ်၏ပြဿနာကိုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်အကောင့်သို့ကဲ့သို့သောများစွာသောအရေးကြီးသောတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ, ယူရမယ်:
ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏ဘဝါးမှအာရုံစိုက်သင့်တယ် - ဒါကြောင့်ငုံ့ထားရမည်,
အားလုံးကိစ္စများတွင်, preference ကိုကသဘာဝပစ္စည်းများမော်ဒယ်များအားပေးပြီးမှရပါမည်။
လူအများစုပြီးသားကွဲပြားခြားနားသောရောဂါများနံပါတ်ရှိသည်ကြောင့်အသက်ကြီးများတွင်ဖိနပ်သို့မဟုတ်ဘွတ်ဖိနပ်၏ရွေးချယ်မှု, တစ်ကယ့်ပြဿနာဖြစ်လာနေသည်။ အလွန်ကြီးစွာသောအာရုံကိုသငျ့လျြောသောရုတ်သိမ်းခြေထောက်များအတွက်အဆင်ပြေထောက်ခံမှုသေချာမှပေးဆောင်ခြင်းနှင့်အနေအထား၌သင်တို့၏ခြေဘဝါးထိန်းသိမ်းရန်သည်အဘယ်မှာရှိအဓိကအားဖြင့်အရိုး Salon တွင်ရောင်းချပြဿနာခြေများအတွက်အဆင်ပြေဖိနပ်။ ဖိနပ်ထုတ်ကုန်နိုင်ပါတယ် Buy နှင့်လက်လီစတိုးဆိုင်များတွင်, သို့သော်, အသက်ကလူကအမြဲတစ်ဦးတည်းနှင့်ခန္ဓာဗေဒပုံ footbed နှင့်အတူသဘာဝကပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကျယ်ဝန်းဆောင်းပါးများမှ preference ကိုပေးသင့်ပါတယ်။
သေးငယ်တဲ့မြင့်တက်ရှိသည်။ ပြားချပ်ချပ်တစ်ဦးတည်းသော ဤကိစ္စတွင်အတွက်တန်ပြန်ဖြစ်၏
ကျယ်ဝန်းတဲ့ rounded သို့မဟုတ်စတုရန်းခြေချောင်းရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်ကျဉ်းမြောင်း promontory ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတော်မူမည်
ပျော့ပျောင်းသည့်သဘာဝပစ္စည်းများ လုပ်. ,
လက်ချောင်းများ၏ဒေသတွင်း၌ transverse ချုပ်ရိုးများနှင့် INSERT ရှိသည်။
ထူဖနောင့်ပေါ်ဖိနပ်ဝတ်ဆင်ရန်အဘယ်အရာ မှစ. ?
သငျသညျအဘယ်သူမျှမစိတ်ကူးခဲ့ပြီးသော၏ 25 ဖန်တီးမှုတီထွင်မှု,
ဘယ်အချိန်မှာငါ estradiol ယူသင့်သလဲ
သတင်းထောက်များအတွက်တင်ပါး၏စစ်မှန်မှုကို ... Tom Cruise နဲ့မေးခွန်းထုတ်!
သားသမီးတို့အဘို့ Space ကို
Kris Jenner ဟာ $2သန်းမှာနှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပ
မီးဖို၌ pies များအတွက်ထောပတ်တဆေးကိုမုန့်စိမ်း
ရစ်ချတ် Gere ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘဝ